Ny "Delicacy" koa dia manana "identité", RFID dia mahatratra ny sakafo matsiro kanton | | Toptag
Fametahana RFID lena / maina
Label fanoherana ny fanaovana hosoka amin'ny RFID
Tagan'ny akanjo RFID
Tagan'ny firavaka RFID
RFID tagan'ny fitaratra
RFID manokana tag
Tag Metal Anti RFID
RFID Gas Silinder Tag
RFID Tag fanasan-damba
Wristband azo ampiasaina
Microchip biby / biby fiompy
Scanner / Reader an'ny microchip
Ny "Delicacy" koa dia manana "identité", tratry ny RFID ny sakafo matsiro Kantonianina
Ny teknolojia RFID dia fantatra ho iray amin'ireo teknolojia mampanantena indrindra tamin'ny taonjato faha-21. Tao anatin'izay taona faramparany izay, niaraka tamin'ny fivoaran'ny teknolojia RFID tsy tapaka, ny fampiharana ny RFID dia nanjary be dia be hatrany, nahatratra ny lafiny rehetra amin'ny andavanandron'ny olona.
Araka ny antontan'isa, 700 tapitrisa eo ho eo ny fihinan'ny hena gisa isan-taona ao, izay handany 170 tapitrisa farafahakeliny ny faritanin'i Guangdong. Ny antony ahafahan'i Guangdong mihinana efa ho ny ampahefatry ny gisa ao amin'ny firenena isan-taona dia mazava ho azy fa tsy azo sarahina amin'ny gisa lovia nentim-paharazana-kantozy Kanto malaza.
Sarotra be ny fomba famokarana gisa Cantonese namboarina. Izy io dia misy fizotran'ny famokarana mihoatra ny 20 manomboka amin'ny fifantenana materialy ka hatramin'ny fandrahoana. Maherin'ny am-polony karazana famonoanna gisa no ampifanarahana sy amboarina, ary misy dingana iray misy fiantraikany amin'ny tsiron'ny gisa voahazo. Guangdong Jianghu Cloud IOT Technology Co., Ltd. dia nanolo-tena hanohana vahaolana ho an'ireo fampiharana tafiditra ao amin'ny indostrian'ny RFID, ary manana ny fahaizana mampiditra vahaolana amin'ny famokarana + R&D + amin'ny Internet of Things. Ny fampiharana ny haitao RFID amin'ny fanarahana ny fanodinana sakafo dia andiana vahaolana namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ary io ihany koa ny fanandramana voalohany nataon'i Jianghuyun amin'ny fizotran'ny fikarakarana sakafo.
Marika rojo rojo fanta-daza fanta-daza ao Dongguan, Guangdong, hahazoana antoka fa matsiro hatrany ny gisa tsirairay, manaraka ny hafainganan'ny fivoarana ara-teknolojia ary izy no voalohany mampihatra ny teknolojia RFID amin'ny fizotry ny gisa roast. Alohan'ny handefasana gisa amin'ny lafaoro, ny gisa tsirairay dia mila mandalo mihoatra ny 20 ny fizotran-tarehy. Ny fomba hiantohana ny fahamendrehan'ny fizotran'ny pretreatment no lakilen'ny fanatontosana ny matsiro.
Amin'ny fizotran'ny fikotranana ny gisa, ny gisa tsirairay izay hohaodinaina dia omena tag RFID, izay mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena ary ampiasaina hanoratana ny mombamomba ny fanodinana. Aorian'ny dingana tsirairay, ny fampahalalana dia voasoratra ao amin'ny tag RFID mba hahazoana antoka fa ny gisa tsirairay dia afaka mameno ny fizotran'ny fikolokoloana tsirairay mba hahazoana antoka fa samy manana ny tsirony matsiro ny gisa tsirairay.
Ny fampifangaroana ny haitao misy ifandraisany, ny varotra ary ny traikefa vokatra, ary ny fananganana orinasan-tsaina manan-tsaina miaraka amin'ny fahafaha-mihetsika, ny fahombiazan'ny loharano ary ny injenieran'ny tranga olombelona dia tanjon'ny Indostria 4.0 manerantany. Ampiharo ny teknolojia RFID amin'ny famaritana vokatra amin'ny fizotry ny famokarana indostria isan-karazany mba hiantohana ny kalitaon'ny famokarana sy ny famakafakana ny fahombiazan'ny famokarana, ary hanatsarana ny fizotran'ny famokarana mba hampitomboana ny fahombiazana, hampihena ny vidiny ary hampiakarana tombony.
Nahasarika ny sain'ny maro ny teknolojia RFID noho ny famakiana lavitra, ny fahaizany mitahiry ambony, ny habeny, ny endriny samihafa, ny fahaizany manohitra ny fandotoana ary ny faharetany. Izy io dia ny hoavin'ny fampiharana Internet of Things ary ny famokarana indostrialy 4.0 (famokarana manan-tsaina, lozisialy, ny haitao lehibe momba ny fitsaboana, ny fambolena ary ny famatsian-tsakafo dia tsy maintsy ihodivirana amin'ny lalana samihafa.
Ny fampiharana ny teknolojia RFID amin'ny fizotran'ny famokarana gisa roast dia fisehoan'ny fampandrosoana samihafa sy ny fampiharana ny teknolojia RFID. Ny fampiasana ny mari-pana RFID mahatohitra maripana avo vita amin'ny akora PET naoty ara-tsakafo mba hahatratrarana ny famokarana sy ny fizotran'ny gisa roast, mba hiantohana ny tsiron'ny sakafo Cantonese, ary hahatonga ny fizotran'ny famokarana ho lasa standardized kokoa.
Antenna RFID dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fampiharana ny teknolojia RFID. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny teknolojia RFID, ny antena RFID koa dia novolavola haingana. Ny tanjon'ny Antenna dia ny mampita ny angovo ambony indrindra ao anatiny sy ivelan'ny puce. Ny fomba fampifanarahana ny famolavolana ny antena amin'ny habaka malalaka sy ny puce tag mifandray aminy dia antony iray mametra ny fivoaran'ny antena.
Ny endrika sy ny fanamboarana ny Antenna RFID dia voakasiky ny famerana fampiharana, ny endrika sy ny toetra mampiavaka ny zavatra fantatra amin'ny toetran'ny antena, ary koa ireo zavatra manodidina ny antena sy ny tontolo iainana. Ity dia lafiny iray manan-danja amin'ny fikarohana teknolojia RFID amin'ny fampandrosoana samihafa amin'ny fampiharana teknolojia RFID. tari-dalana.
Miaraka amin'ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny teknolojia RFID, mihamaro hatrany ireo vokatra RFID novolavola ary azo ampiharina tsara. Amin'ny ho avy, ny fampandrosoana ny tagan'ny elektronika RFID dia hitia koa ho maitso sy hivezivezy amin'ny akora hamenoana ny filan'ny fampiharana indostria samihafa.
Fotoana fandefasana: Dec-04-2020
Mitsangana ny tsenan-divay "divay tranainy", ny RFID miverina amin'ny fanoherana ny fanaovana hosoka dia mampiseho ny fahaizany